Creative Writing » ရှိုက်သွင်း မှုတ်ထုတ် — ဟဲ့ ပလုပ်တုပ်!	15
Posted by Thint Aye Yeik on Nov 20, 2015 in Creative Writing, Ideas & Plans, My Dear Diary | 15 comments
Alinsett @ Maung Thura says: Phone နဲ့ပိုစ့်တင်တာ တိုင်ပတ်—
ဘေးက ကောင်မလေးကတော့ ပေစောင်းစောင်း ကြည့်နေတယ်၊ သူ့ကိုများ ရယ်တယ်ထင်နေလားမသိ၊၊ သူကလည်း ကျနော့်ဘေး
သူ့ဘဲဘဲလေးကို ထိုင်စောင့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ၊ (အင်းးးး ငါ့မှာတော့ ထိုင်စောင့်နေလည်း ရောက်လာမယ့် ဂဲဂဲ(girl girl)လေးတစ်ယောက်တောင် မရှိပါလား)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဆေးလိပ်လည်း မသောက်ရဘူး။ အရက်လည်း မသောက်ရဘူး။ ကွမ်းလည်း မစားရဘူး။ ဘိန်းလည်း မရှုရဘူး ဆိုရင် နတ်ပြည်ဘယ်မှာလဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: .လောလောဆယ်တော့… Net ပြည် လေး… ရှိနေတာ…တော်သေး…
မြစပဲရိုး says: ဘေးက ကလေးမ က စီးကရက်နံ့လေး မွှေး လိုက်တာ လို့ များ ပြောရင် ဆက်သောက်မဲ့ သဘောပေါ့။ :-))
Alinsett @ Maung Thura says: သာမီးလေးတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်သယ်…
တောတွင်းပျော် says: ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်.. ဘေးနားက အသားဖြူဖြူလေးကို
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖြစ်ရမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ( စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ဟာသတစ်ပုဒ်အကြောင်း သတိရမိတာ မဆိုးပါဘူး၊၊)
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့လို ဟာသ စာရေးဆရာကြီးတွေဟာ.. ဒုက္ခကို ဟာသအဖြစ်…. ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းသူလို့…ပြောရမလို…
Kaung Kin Pyar says: ဒါလေးတောင် Facebook မှာ Share ထား မိသေးတယ်… ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများ??
Share ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်က… (ဆိုလိုတာက စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်တယ်ပေါ့ညှော် ) လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: အိုက်…. သစ်ထူးလွင်က… ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ… ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ… ရှာဖွေ တင်ပြတတ်လွန်းတယ်..
ဟိုတလောကလည်း… http://health.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_13.html အိုက် ကျန်းမာရေးသတင်းပေးချက်ကို ဖတ်ကြည့်မိပြီး…
…အော်..သစ်ထူးလွင်..သစ်ထူးလွင်… အနော် သိလိုက်ပါပြီ….ဂျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ည ကိုးနာရီ လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားအောက်
Alinsett @ Maung Thura says: ငင့်
ဦးကျောက်ခဲ says: ဆေးလိပ်သောက်တာ မကျန်းမာ
အဟိ… ဦးလေးလည်းသောက်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: သူနဲ့လက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်.. ဆိုင်ပြင်ခုံနေရာရှိမှ.. ဆေးလိပ်ပေးသောက်မှ…ထိုင်ဖြစ်ကြတာ..။